Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhambaal hambalyo ah u diray Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio guterres oo markii labaad dib loogu doortay inuu noqdo Xoghayaha Qaramada Midoobay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dawladda Federaalka Soomaaliya soo dhowaynayso inuu markale Antonio guterres noqdo xoghayaha guud, sidoo kale na ay dawladdu si hagar la’aan ah u taageerayso.
Golaha Ammaanka ayaa Antonio guterres markii labaad dib ugu doortay inuu noqdo Xoghayaha EE Qaramada Midoobay, isla markaana waxaa uu kusoo baxay Qaraar tirsigiisu ahaa 2580, sida uu shaaciyay Danjiraha Dowladda Estooniya.
Antonio Guterres oo 72-sano jir ah ayaa waxaa uu yahay Xoghayihii Guud ee 9-aad ee QM noqday sanadkii 2017-kii, wuxuuna horey muddo 10-sano ahaa Madaxii Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga ee UNHCR.
Waxa kale oo uu soo noqday Ra’isul Wasaarihii dalka Bortiqiiska muddadii u dhexeysay sanadihii 1995-kii ilaa 2002-dii.
Maqaal horeCiidamo shisheeye oo Dhoolatus Milliteri ka sameeyey xeebaha Somalia
Maqaal XigaCabdirashiid Janan oo socdaal ku tegay Magaalada Addis Ababa iyo ujeedkiisa